Ukunethezeka Okugqamile Kwesihambi Esisodwa - I-Airbnb
Ukunethezeka Okugqamile Kwesihambi Esisodwa
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Karen
Amawindi amaningi agxilisa ipulazi lami elivulekile ngokukhanya kwemvelo. Ifakwe ngamathoni enkuni eshintshayo afudumele futhi igcizelelwe ngobuhlakani bamasiko. Imaphakathi nenkabeni yesinye sezifunda zomlando zedolobha, iseduze kwedolobha, ukuyothenga, amakolishi, amapaki endawo nawesifunda, kanye nezindawo zokuzijabulisa. Indawo ethule, ekleliswe ezihlahleni, indawo yokupaka engaphandle komgwaqo, igumbi langasese, indawo yokuphumula, nekhofi netiye elimnandi kwenza lokhu kube "ikhaya elikude nekhaya" lakho eliyintandokazi maphakathi neLouisiana!
Indawo yami ilungele isihambi esisodwa noma, kanye nendawo engihlala naye, imindeni emincane enezingane ezindala ezivakashela indawo yase-Alexandria ngebhizinisi, ukuzijabulisa, ukufunda, ukuhlangana kabusha, amaholide, imihlangano yesonto, noma izinkomfa. Igumbi langasese lilala oyedwa noma amabili, nombhede wosuku onethezekile womuntu ohamba yedwa kanye nombhede we-trundle olungele umngane wakhe.
Ikhaya likaKaren lise-Alexandria, eLouisiana, e-United States.
Indawo yethu iyindawo ethule, ehlukahlukene enengxube yemindeni esencane, abantu abadala abaphila impilo ephakathi, kanye nalabo asebathatha umhlalaphansi. Mina nomakhelwane bami sijabulela ukuhambahamba ekuseni noma kusihlwa, ukugijima, noma ukuhamba ngebhayisikili emigwaqweni ephahlwe yizihlahla, futhi izingadi ezinothile ziba zinhle nakakhulu lapho ama-azalea, ama-crape myrtle, noma ama-camellias eqhakaza!
Yathuthukiswa ngemuva kweMpi Yezwe II, isifunda sase-Alexandria Post-War Suburbs Historic District saziwa ngokugxila kwezindawo zokuhlala zaseRanch, Contemporary, kanye ne-Wrightian, ezinemizi eminingi eyakhiwa kusukela ngo-1945 kuya ku-1963. Yengezwe kuRejista Kazwelonke ngo-2014.
Eduze kwesifunda sase-Alexandria Garden District esingokomlando, le miphakathi yomibili ithokozela imicimbi eminingana ehlanganyelwe, yezinkathi ezithile zonyaka, okuhlanganisa iHoliday Parade of Homes, Ukuthengiswa Kweyadi Lomphakathi Okubanzi, umbukiso omncane weMardi Gras, phakathi kokunye. Uma uvakasha, zizwe ukhululekile ukujoyina iklabhu yokugijima yasendaweni ukuze uthole omunye wemigijimo yabo yamasonto onke, noma ujabulele ukudla kwenye yezindawo zethu zokudlela ezidumile, unikeza ukudla okumnandi kwase-Louisiana nomculo ophilayo, ukuze uqalise!
Ngivamise ukusebenza ehhovisi lami lasekhaya noma kwenye indawo eduzane futhi ngihlala ngitholakala ngefoni noma ngombhalo!